जनवरी 28, 2017 जनवरी 28, 2017 साइन्स इन्फोटेक	2 Comments बढि बाँच्न, रुनु
बढि बाँच्न चाहनुहुन्छ भने रुनुहोस् मज्जाले ! सामान्यतः रुन कसैलाई पनि मन पर्दैन । मानिस दुई हिसाबले रुन्छन् । एउटा खुशीमा र अर्को दुःखमा । धक फुकाएर रुँदा मन हलुंगो हुन्छ, पीडा कम हुन्छ अनि शितल हुन्छ । मान्छेको आँखाबाट आँशु आउनु कमजोर मनको उपज नभई सामान्य प्रक्रिया हो । महिला होस् वा पुरुष मनमा दुख पर्दा तथा पीडा हुँदा जो पनि रुन्छ । कतिपय मान्छे आफ्नो आँखाबाट आँशु बगेको अरुले देखेभने आफ्नो इज्जत नै जान्छ भनेर आँखाभित्रै आँशु लुकाउन तथा लुकिलुकी आँशु झार्न चाहन्छन् ।
मनोविश्लेषकका अनुसार महिलाहरुको तुलनामा आँशु लुकाउने प्रवृत्ति पुरुषहरुमा बढि हुन्छ । तर वास्तवमा आँशु लुकाउनु वा नरोएको तथा खुसी रहेँको ढोँग रच्नु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ । विज्ञहरुका अनुसार रुनु मान्छेको स्वास्थ्यका लागि निकै सकारात्मक काम हो । रुने बानीले मानिसको शारीरिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यमा निकै फाइदा पूराउने विज्ञहरु बताउँछन् । हामीले हाँस्दा स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुनेबारे धैरै सुनेका छौं । तर रुँदा हुने फाइदाको चर्चा नै हुँदैन। खासगरी रुँदा पनि शरीरका लागि धेरै फाइदा हुने अध्यनले देखाएको छ ।
१. तनाव बढाउने हर्मोनलाई नियन्त्रण गर्छ
रुने बानीले केवल शरीरमा मात्र होइन मस्तिष्कमा पनि सकारात्मक असर पार्छ । विशेषज्ञहरुका अनुसार रुनाले मान्छेको सरीरमा स्ट्रेस हर्मोन नियन्त्रण हुन्छ र तनाव कम हुन्छ । यसले मुटुको चाललाई पनि नियमित गर्छ ।
← के हो प्रेम ?
रुनुका फाइदाहरु →
जनवरी 28, 2017 साइन्स इन्फोटेक 0
2 thoughts on “बढि बाँच्न चाहनुहुन्छ भने रुनुहोस् मज्जाले”
Pingback:धेरै बाँच्न चाहना भएमा यसो गर्नुहोस्
Pingback:जान्नुहोस् ! यस्ता छन् घुम्न निस्किनु भन्दा अघि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु